Royal Foods VietNam Co, Ltd. ndeimwe yeakakura kugadzira Canned Sardine, Mackerel muSoutheast Asia nyika, pasi pezita rezita "Three Lady Cooks Brand" iyo yave ichizivikanwa pasi rese uye yakavimbika.
Khanh Hoa Salanganes Nest Kambani ndiyo inotungamira bhizinesi mukutungamira uye kushandisa zvisirizvo zviwanikwa zviwanikwa muVietNam. Kuburikidza anopfuura makore makumi maviri ekukudziridzika, Khanh Hoa Salanganes Nest Kambani yakagara ichiedza kuyedza uye kusiyanisa zvigadzirwa zverudzi kuitira kuunza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kumusika uye nekuunza kukosha kwehutano hwedendere rema salanganes kune vatengi.
Mayora Boka rakazomisikidzwa zviri pamutemo muna 1977 uye kubva ipapo rakakura kuita kambani inozivikanwa yepasi rose muFast Moving Consumer Goods indasitiri. Chinangwa cheboka reMayora kuve sarudzo inosarudzika yechikafu nechinwiwa nevatengi uye nekupa huwandu hwakawedzerwa kune vane chekuita nezvakatipoteredza.
Mapapiro anozivikanwa seboka rakamisikidzwa uye rakangwara rebhizinesi muIndonesia ine simba rakanyanya mukugadzirwa kwesipo uye sipo. Zvigadzirwa zvemapapiro zvinozivikanwa nekuda kwehunhu uye kugona, uye zviripo nyore.
Kutenda kune DTS michina yemhando yepamusoro uye nebasa rakatanhamara, DTS yakawana kuvimba kweWings, muna2015, Wings yakaunza DTS kudzoka uye yekubika musanganisi weavo manoni noodles ekugadzira mabhegi.
Semugadziri anotungamira weThailand uye mutengesi wemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvemakokonati emakwenzi, mfp inoratidzira yakakura chigadzirwa mutsetse unotangira kubva kumukaka wekokonati nekirimu, muto wekokonati, michero yekokonati, kusvika kumhandara kokonati mafuta.
Parizvino, kambani inogadzira ingangoita 100% yemari yayo kubva kunze kwenyika kuenda kumisika pasirese - kusanganisira idzo dziri muEurope, Australasia, Middle East neNorth America matunhu.
"EOAS" izita rakafanana nemafuta ezvinonhuwira kubva muna 1894. Kubva 1999 EOAS inoverengeka semutengesi wemafuta akakosha zvikuru muSri Lanka. Kubva mugore ra2017, EOAS ine hutsva hutsva hwemukaka wemakokonati mukaka.DTS inopa zvishandiso kubva kuzadza seamer, kudzosera, kurodha unloader, labeler nezvimwe. DTS yakazvipira kubatsira mafekitori muSrilanka kusununguka kwemaoko avo uye nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. kuwedzera misika yavo.
Ceylon Beverage Can yakagadzwa mu2014 seyakazvimiririra aruminiyamu magaba uye inopera inogadzira yakavakirwa muColombo Sri Lanka. Kune yavo keni yemagaba kodhi iyo OEM yeNestle, DTS inopa kudzosera, izere otomatiki loader unloader, yemagetsi trolley etc.
Brahims (brand yeDewina Chikafu Maindasitiri) yakafanana nechinonaka, chiri nyore, chikafu-chakagadzirira-kudya. Isu tinopa iyo sterilziation retort kwavari, yakatsiva iyo Japan brand. Iyo yekudzorera iri kushandisa yakanaka kwazvo uye ichienzaniswa neimwe yeJapan yekudzorera inogadzira, mutengi anopa kukoshesa kwakakwirira kuDTS sezviri pazasi:
Delta Chikafu Maindasitiri FZC ndeye Mahara Zone Kambani iri muSharjah Airport Yemahara Zone, UAE yakavambwa muna 2012. Delta Chikafu Maindasitiri FZC's chigadzirwa renji inosanganisira: Tomato Paste, Tomato Ketchup, Evaporated Milk, Sterilized Cream, Hot Sauce, Yakazara Cream Milk Upfu, Oats, Cornstarch, uye Custard Upfu. DTS inopa maviri seti yemvura pfapfaidzo uye Rotary retort ye sterilizing evaporated mukaka nekirimu.
Muna 2019, DTS yakahwina yakagadzirira-kunwa kofi chirongwa cheNestlé Turkey OEM kambani, ichipa yakazara seti yemidziyo yemvura spray rotary sterilization retort, uye kumisikidza nemuchina wekuzadza weGEA muItari neKrones kuGerman. DTS timu yakanyatso kugutsa zvinodiwa zvemhando yepamusoro, yakaoma uye zvine hungwaru mhinduro, pakupedzisira yakakunda kurumbidzwa kwekupedzisira mutengi, nyanzvi dzeNestlé dzinobva kuUnited States neSouth America yechitatu-bato.
Bonduelle ndiyo yekutanga mhando yemiriwo yakagadziriswa muFrance kugadzira raini yakasarudzika yechikamu chimwe chete chemiriwo yemumagaba inonzi Bonduelle "Touche de," inogona kudyiwa inopisa kana kutonhora. Korona yakashanda pamwechete naBonduelle kugadzira iyi imwechete chikamu kurongedza mutsetse unosanganisira ina dzakasiyana mhando yemiriwo: tsvuku bhinzi, howa, nhova uye chibage chinotapira.
Muna 2008, dts dzakapa iyo yekutanga yakazara mvura rotary sterilizer kune nestle qingdao fekitori muchina yekugadzirwa kwemumagaba mukaka wakasviba. Yakabudirira kutsiva mhando imwechete yemidziyo yakagadzirwa mugermany. Muna 2011 dts yakapa maseti gumi nemaviri e dts-18-6 steam rotary sterilizers kuna jinan yinlu (iyo hunyanzvi hwe600cpm) yekugadzira yakasanganiswa congee.